🥇 ▷ Walmart waxay kaxeysaa dhamaan xayeysiinta ciyaaraha rabshadaha wata ee dukaanadiisa, laakiin waxay sii wadaysaa iibinta hubka ✅
Walmart waxay kaxeysaa dhamaan xayeysiinta ciyaaraha rabshadaha wata ee dukaanadiisa, laakiin waxay sii wadaysaa iibinta hubka
The toogashooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay dalka Mareykanka ayaa sababay isbedelka maskaxda maxalliga ah ee dalka Mareykanka. Si kastaba ha noqotee, isbedelka la sameeyay ma aha waxa dareenka guud ay caan ku yihiin, laakiin waa iska soo horjeed. Waana shaqsiyaad fara badan oo dalka ka tirsan eedaynta cayaaraha fiidiyowga ee asal ahaan falalkaas rabshadaha wata, halkii ay ka iibin lahaayeen hubka aan kala sooc lahayn ee hubka. Hadda, Walmart Waxay cadeysey oo keliya in maskaxdani ay lamid tahay tan, illaa Waxay ka tirtireen dhammaan muuqaallada ku saabsan ciyaaraha fiidiyowga rabshadaha wata ee dukaanadooda, laakiin waxay sii wadaan inay iibiyaan hubka.
Qaabkaan, Walmart ayaa ku amartay shaqaalaheeda inay ka baabi’iyaan astaamaha ciyaaraha rabshadaha dukaamadooda, ay ka mid yihiin saldhigyada si loo tijaabiyo tirakoobka magacyada qaarkood, kormeerayaal muujinaya sawirrada cayaaraha noocaas ah iyo boodhadhka dhammaan noocyada. Dhaqdhaqaaqaani wuxuu macno samayn lahaa haddii aan erayga ‘ciyaarta ciyaarta’ u beddelo ‘hubka’, laakiin sidaas maaha dukaamada ku yaal Mareykanka.
Ogeysiinta ayaa gaartay dhammaan shaqaalaha dukaamada Walmart, halkaas oo loo sheegay inay tahay inay sameeyaan “tirtir dhammaan calaamadaha iyo astaamaha cayaaraha qalalaasaha leh” Iyada oo si dhakhso leh u saamaynaysa Go’aanku ma uusan qaban wax aan ka ahayn xaalada sii dheeri sii Kuwa ka mid ah kuwa si qosol leh ugu andacoonaya in cayaaraha fiidiyowga ay sabab u yihiin falalka rabshadaha ka dhaca Mareykanka iyo kuwa ku andacooda in iibinta hubka ay tahay in lagu eedeeyo wax walba.
iyada oo loo marayo: GameDebate